Panavision မှကင်မရာမှအပြီးသတ်ပုံရိပ်ဂေဟစနစ်ကို Cine Gear 2019 တွင်ပြသခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Cine ဂီယာ 2019 မှာ Featured Panavision အားဖြင့်ကင်မရာ-to-Finish ကို Imaging ကဂေဟစနစ်
Cine ဂီယာ 2019 မှာ Featured Panavision အားဖြင့်ကင်မရာ-to-Finish ကို Imaging ကဂေဟစနစ်
Panavisionend-to-end ဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဝန်ဆောင်မှုပေး, ကုမ္ပဏီရဲ့အစဉ်အဆက်-တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုတခုအဖြစ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုဂေဟစနစ် post မှ Paramount မှာစတူဒီယိုမှာ Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲ (မေ 31-ဇွန်လ 1) ကိုပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ Panavision, အလင်းကိုသံ နှင့် လီစိစစ်မှုများ အဆင့် 408 အပေါ်တဲ S3 မှာဘက်ပေါင်းစုံနည်းပညာများနှင့်စနစ်များတစ်ခုခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မယ် - မျက်ကပ်မှန်, ကင်မရာများနှင့် filter ကနေ State-Of-The-Art ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှု Workflows အထိ - အရှိဆုံးစွယ်စုံများနှင့်အစွမ်းထက်ဇာတ်လမ်းပြောပြပေးဖို့ Panavision ရဲ့ကတိကဝတ်သရုပျဖျောကြောင်း tools တွေ။
"Panavision မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုချဲ့ထွင်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်" ဟုကင်မ် Snyder, Panavision ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းအမြင်အာရုံအနုပညာရှင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့နည်းပညာ၏ကြီးမားတဲ့အာဏာကိုပြုပြင်ရေးဆွဲပြီးအာရုံစိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုသရုပ်ပြစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ "
Display ကိုပေါ်ထိုးဖောက်များထဲတွင် Panavision နှင့်အလင်းသံရဲ့အသစ် LINK HDR system ကိုဖြစ်ကြသည်။ စားသုံးသူပရီမီယံမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံများကိုရှာအံ့သောငှါအဖြစ်ဖန်တီးမှုများကိုပိုမိုအရင်ကထက် HDR-နိုင်စွမ်းဖြန့်ဖြူးပလက်ဖောင်းထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ LINK HDR ထုတ်လုပ်မှုလျှောက်လုံး HDR ကို (မြင့်သော dynamic range ကို) ပုံရိပ်များကြည့်ရှု၏စိန်ခေါ်မှုဖြေရှင်းရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အား post မှတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တွဲဖက်အတွက်ရွေးချယ်စရာကြည့်ရှုရာပူဇော်သက္ကာ HDR နှင့် SDR, LINK HDR အဆိုပါပုံရိပ်ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးစားသုံးသူမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏တူညီတဲ့အရည်အသွေးမြင့်မှာသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်ရိုက်ကူးရေး, ဒါရိုက်တာ, အယ်ဒီတာများနှင့်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ပေးပါသည်။
အဆိုပါ LINK HDR စနစ်၏ပါဝင်ပါသည်:
Panavision LINK HDR တွင်-သတ်မှတ်မည်လှည်း - ဖန်တီးမှုများကင်မရာကနေတိုက်ရိုက်လွှ HDR နှင့် SDR ကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်ကမ်းလှမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးသောစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး configurations နှင့်အတူ outfitted တစ်ဦးမော်ဂျူလာလှည်း။
အလင်းကိုသံ LINK HDR နေ့စဉ် - အယ်ဒီတာများအကြား toggle, ဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့တစ်ပြိုင်နက် HDR နှင့် SDR Deliverable ဖန်တီးသော NLE လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပို့ကုန် format နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါ။
အလင်းကိုသံ LINK HDR ကို Finish ကို - တစ်ဦးဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များပေါင်းစပ်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသော HDR ပလက်ဖောင်းမှပေးပို့များအတွက် HDR mastering လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်-set ရာ၌ဖန်တီးမှုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလင့်ထားသောဦးဆောင်နည်းပညာများ။
"ဟုအဆိုပါ HDR ကို format ကို၏မွေးစားနှုန်းလျှင်မြန်စွာကြီးထွားအဖြစ်, ဖန်တီးမှုများမပြီးဆုံးလိုက်တဲ့ suite ကိုမှတဆင့်ပေါ်-set ကနေတသမတ်တည်းပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုရန်အဘို့အစဉ်ထက် ပို. အရေးပါဖြစ်ပါတယ်" ဟု Colorist မှ Ian Vertovec ကြီးကြပ်အလင်းသံမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ကျနော်တို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတို့ကဒီသစ်ကိုပေးပို့များအတွက်လိုအပ်သမျှ tools တွေကိုရှိသည်ဖို့ချင်တယ်။ LINK HDR ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုစိတျထဲမှာသူတို့နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ "
Panavision ရဲ့ထောင်စုနှစ် DXL2 နှင့် DXL-M ကင်မရာစနစ်များလည်းဒီတိုးချဲ့ဂေဟစနစ်၏တန်ဖိုးသရုပ်ပြခြင်း, Panavision တဲမှာမိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးမှတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုခွင့်ပြုထားတဲ့သစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်တကွ, DXL2 ရဲ့ 6G 4K SDI လက်ငင်း, Teradek တစ်ခုတည်း SDI cable ကိုအတူ Bolt က 4K ယခုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ DXL2 မှနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများလည်းပါဝင်သည်: တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံကို C-Motion FIZ module ကိုအပြည့်အဝမှန်ဘီလူးမြေပုံထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Arri WCU4 ကြိုးမဲ့မှန်ဘီလူးထိန်းချုပ်မှုဟန်းဆက်၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု; ကပစနှင့် VFX များအတွက် 8K ဖိုင်တွေမော်ကွန်းနေချိန်မှာရိုးရာနေ့စဉ်သတင်းစာများ၏လွယ်ကူသောဖန်ဆင်းခြင်းခွင့်ပြုတဲ့ proxy ကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ; တိုးချဲ့အသံစွမ်းရည်ဖြည့်စွက်ကြိုးမဲ့အသံမော်ကျူး; နဲ့ iPhone နှင့် Android များအတွက် DXL ထိန်းချုပ်ရေး။
အနီရောင်ရဲ့ DSMC2 ကင်မရာများ၏သေးငယ်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်နှင့်အတူ DXL ၏ modular နှင့်ဆက်သွယ်မှုလက်ထပ်ထားတဲ့ DXL-M, ယခုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Primo HDR ကို view finder ပါ, DXL menu ကိုစနစ်နှင့် LiColor2 မှထို့အပြင် DXL-M ယခု 2x ဖြတ်ပြီးနှစ်ခုလွတ်လပ်သောစောင့်ကြည့်ရေးလမ်းကြောင်းပို့2×4SDI လက်ငင်းကမ်းလှမ်း HD-SDI ရလဒ်။ ကဆက်ပြောသည်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ဘက်ထရီဓာတ်လှေကားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အတူဤတိုးတက်မှုအတွက်ကိရိယာအစုံ၏ထိရောက်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှထည့်ပါ။ အဆိုပါရလဒ်အာကာသတစ်ဦးပရီမီယံမှာဘယ်မှာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, ဝေးလံသောဦးခေါင်းရိုက်ချက်များနှင့်အခြေအနေများအပါအဝင်မည်သည့်ပစ်ခတ်မှုမြင်ကွင်းမှအဆင်ပြေချက်နဲ့သောအပြည့်အဝ-တပ်ဆင်ထားပြီးကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။
Panavision ရဲ့ LCND တစ် variable ကိုအရည်ကြည်လင်ကြားနေသိပ်သည်းဆ filtration စနစ်, တိုးချဲ့ features အသစ်နှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ LCND အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်အပေါ်တီထွင်ဖန်တီးမှုမှဘာသာသော Preston ဟန်းဆက်နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကနေတဆင့်ယခုကြိုးမဲ့ controller ဖြစ်ပါတယ်။ အစားမျက်ဝန်းများ၏ ND filter ကိုစီးနင်းခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့အလင်းရောင်အခြေအနေများအောက်တွင်ပေးထားသောမှတ်တိုင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စွမ်းရည်ဓာတ်ပုံများ၏ယခုအချိန်တွင်အစွမ်းထက် image ကိုထိန်းချုပ်ရွေးချယ်စရာကထပ်ပြောသည်။ LCND လည်းလက်စွဲစာအုပ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တစ်ခုတည်း filter ကိုဗန်းထဲသို့တည်ဆောက် 24 နာရီပြည်တွင်းရေးဘက်ထရီရှိပါတယ်။
သာလွန်မှန်ဘီလူးအရည်အသွေးနှင့်ပွိုရွေးချယ်ရေးပို့ဆောင်အပေါ် Panavision ရဲ့ကာလကြာရှည်အလေးပေးကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အနုပညာလိုအပ်ချက်များကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်အဖြစ်ဦးစားပေးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Cine ဂီယာမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သည့် Primo-X ကို (weatherproof နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့် gimbal ဖြေရှင်းချက်), Panaspeed (ကြီးမားသော format နဲ့, ထိုဂန္ Primo ကြည့်နှင့်အတူ High-Speed ​​ကို T1.4), H-စီးရီး (စပျစ်သီးအပါအဝင်မှန်ဘီလူး၏ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားဖြစ်အစုစုကို, ဆနျးစစျနိုငျသညျ ပုံတူအလင်းဆုံကြီးမားတဲ့ပုံစံများအတွက်ကြည့်) နှင့် UltraVista (1.65x ကြီးမားသော-format ကို anamorphic) လိုင်းများအဖြစ် Panavision ရဲ့ကြီးမားတဲ့-format ကိုပြုသောပူဇော်သက္ကာအခြားမှန်ဘီလူး။
ပြအပြင်, Panavision, အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အတူလက်တွဲအတွက်Oscar®-အမည်စာရင်းတင်သွင်းရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ယောဟနျသ Schwartzman, ASC featuring တစ်ဦး panel ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ သူအမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြရန်သူ၏ချဉ်းကပ်ဆြေးြေိံးနှင့်အမြင်အာရုံသဘောတရားများနှင့် tools များအကြားပေါင်းစပ်လေ့လာအဖြစ်စက္ခုဗေဒဒန် Sasaki ၏ Panavision ရဲ့ SVP Schwartzman join ပါလိမ့်မယ်။ Schwartzman ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများကိုအပေါ် post မှ Pre-ထုတ်လုပ်မှုမှသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြပါလိမ့်မယ် အဆိုပါဓား နှင့်လာမည့် နောက်ဆုံးခရစ္စမတ်, အဆိုပါဖြစ်သူရှယ်ရီလန်စင်းပြဇာတ်ရုံထဲမှာ 1 နံနက်: 11 မှာဇွန်လ 45 အပေါ်.
လီစိစစ်မှုများအဆိုပါ LEE100, အသစ် updated 100mm filter ကိုပိုမိုပေါ့ပါးအလေးချိန်နှင့်တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်ဝါကြွားတတ်ကြောင်းစနစ်အ mount ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ LEE100 Filter ကိုစနစ်တစ်လည်ပတ်သော့ခတ်အဖြစ်အသစ်ဒီဇိုင်းကလစ်-အပေါ် Polarized filter ကိုအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအဘို့အဆက်နွယ်။ ထို့အပြင်အထူးဒဏ်ငွေ-tuning များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဇာကွန်နီယမ် gels ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအပါအဝင်အလင်းရောင် gels ၏ Lee ရဲ့အပြည့်အဝစုဆောင်းခြင်း, လ်တာ LED, မွှမ်းတင်အဖြစ်ကြားနေ-သိပ်သည်းဆ filter များ၏ ProGlass Cine IRND အကွာအဝေး, တိကျစွာအဆိုပါ exacting လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တည်ဆောက်လိမ့်မည် ရိုက်ကူးရေး၏။
"Cine ဂီယာမှာ display ကိုပေါ်တိုးတက်မှုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး၏လက်၌ဖန်တီးမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထားကြောင်းအဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်ပေးရနျကြှနျုပျတို့၏ကတိကဝတ်နမူနာယူ," Snyder ကပြောပါတယ်။ "တစ်ခုချင်းစီ tool ကိုမဆိုလိုအပ်နေသို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်တွေ့ဆုံရန်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုစုစည်းဂေဟစနစ်တစ်ခုဒြပ်စင်အဖြစ်ပဋိသန္ဓေယူတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှရလဒ်များကိုတင်ဆက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမှမျှော်လင့်နေ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အသိုင်းအဝုိင်း, ကြှနျုပျတို့သူတို့မနက်ဖြန်၏အမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြများတွင်အသုံးပြုနေဘယ်လိုကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။ "
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ကင်မရာများ CineGear ရုပ်ရှင်ပညာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အလင်းကိုသံ Panavision post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် 2019-05-31
ယခင်: အနောက်ကမ်းခြေကိုယ်စားပြုမှုအဘို့အရိပ်လက္ခဏာများကို T-ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် DiMaggio ကိုယ်စားပြုမှု reverse
နောက်တစ်ခု: InfoComm 2019 မှာ AV စနစ်အသုံးပြုသူများလွယ်ကူအွန်လိုင်းနှင့် OTT ဗီဒီယိုထုတ်ဝေရေးရှိမယ် Cablecast